Maitiro ekudzora kushushikana uchishandisa bhaibheri ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Maitiro ekudzora kushushikana uchishandisa bhaibheri. Kushushikana kunoratidza se kunzwa kutya uye kusagadzikana mumamiriro akasiyana. Nokudaro, zvakakosha dzidza kuzvidzora kuitira kuti zvirege kukuremedza kana kukuganhurira.
Kudzora kushushikana kunogona kuoma. Zvisinei, unogona kuzviita uchibatsirwa naMwari. The Bhaibheri rinoratidza nzira yekuderedza kuzvidya mwoyo nerubatsiro rwaJesu. Iwe haufanire kubata nekushushikana uri wega. Mwari anewe.
Heano mamwe mazano ekuti ungadzora sei kuzvidya mwoyo maererano neBhaibheri:
1 Maitiro ekudzora kushushikana uchishandisa bhaibheri
1.1 1. Dzidza zvinotaura Bhaibheri
1.2 2. Ipa kuzvidya mwoyo kwako kuna Mwari
1.3 3. Tsvaka maonero matsva
1.4 4. Gadzirisa dambudziko rega rega rimwe nerimwe
1.5 5. Tsvaka rubatsiro
1. Dzidza zvinotaura Bhaibheri
Bhaibheri rinotaura nezvaMwari Wemasimbaose, anokuda uye anodzora upenyu hwako. Kana iwe ukapa hupenyu hwako kwaari, haufaniri kutya ramangwana, nokuti Ari kukuchengeta. Paunoverenga Bhaibheri, uchaona kuti ungazviita sei Mwari akanaka, akangwara, akarurama uye haambokundikani.
Usazvidya moyo nechinhu chero chipi, kana zvikumbiro zvako zvisingazivikanwe pamberi paMwari mumunamato wese nekuteterera, pamwe nekutenda.
VaFiripi 4: 6-7
2. Ipa kuzvidya mwoyo kwako kuna Mwari
Kuzvidya mwoyo kwakafanana nomutoro unorema. Ipa mutoro kuna Mwari. Taura nezvekunetseka kwako uye bvunza, "Tora izvi, handigoni kuzvitakura ndega." Vimba naMwari uye murege vadzore hupenyu hwako. Pose paunonyanya kuzvidya mwoyo, udza Mwari uye umupe kuzvidya mwoyo.
Kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuchengetai.
3. Tsvaka maonero matsva
Nzira yakanaka yekudzora kufunganya ndeye tarisa mamiriro acho kubva pane yakatarisa maonero. Kana iwe wakagamuchira Jesu semuponesi wako, une chokwadi chemberi nezveramangwana:
Iva tsika dzako pasina makaro, gutsikana nezvauinazvo izvozvi; nekuti wakati: Handingakusiye, kana kukusiya. VaHebheru 13:5
Uchaenda kudenga, kuupenyu husingaperi.
Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Anonzwa shoko rangu, akatenda uyo akandituma, ane upenyu husingaperi; uye harizouyi mukupiwa mhosva, asi rapfuura murufu kuenda muupenyu. Johani 5:24
Zvinhu zviviri izvi zvinovimbiswa zvisinei nezvinoitika muhupenyu hwako. Chero zvichaitika, Mwari vachakuchengeta. Munguva dzakaoma zvikuru dzehupenyu, nekunetseka kwakanyanya, yeuka izvi.
Kuzviisa mupfungwa kunobatsirawo kudzora kufunganya kwezvinhu zviduku. Kuwana zvibodzwa zvakaderera pabvunzo kana kupotsa bhazi hazviparadze hupenyu hwako hwese. Kuzvidya mwoyo hakubatsiri kugadzirisa matambudziko eupenyu.
Uye ndiani wenyu angave anokwanisa kuwedzera kubhiti paurefu hwake nekushanda zvakaoma?
Zvakanaka, kana iwe usingakwanise kana kushoma, unonetsekerei nezvevamwe?
Ruka 12: 25-26
4. Gadzirisa dambudziko rega rega rimwe nerimwe
Kuzvidya mwoyo kunowanzoitika nekuda kwekufunga nezvedambudziko rakawandisa panguva imwe chete. Kana izvi zvaitika, unofanira kuronga zvaunokoshesa. Matambudziko amangwana haana kufanira kuzvidya mwoyo. Ingotarisa mukugadzirisa matambudziko azvino uye siya ramangwana mumaoko aMwari. Usaedza kugadzirisa zvinhu zvose panguva imwe chete; kugadzirisa dambudziko rimwe panguva.
Naizvozvo musafunganya nezvamangwana, nokuti mangwana achazvifunganyira. Zvakaipa zvake zvinoringana zuva rimwe nerimwe.
Mateu 6: 34
5. Tsvaka rubatsiro
Hausi wega. Kudzora kufunganya hakusi nyore nguva dzose, asi Mwari vanoshandisa vamwe vanhu kukubatsira. Kuva nevanhu vakatodzidza kubata nefunganyo kwakanaka kuona maitirwe aungazviita nenzira inoshanda. Saka tsvaga rubatsiro rwemufundisi kana mutungamiri waunovimba kuti akutungamirire. Kana kuzvidya mwoyo kurikukonzera matambudziko emuviri, tsvagawo rubatsiro kuna chiremba.
Kuzvidya mwoyo mumoyo memunhu kunomuremedza;
Asi shoko rakanaka rinomufadza.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba kuti chinyorwa ichi chinokubatsira kuziva nzira yekudzora kuzvidya mwoyo uchishandisa bhaibheri. Rangarira kuti Mwari anewe, asi haakurwire, nokudaro, kuda kwako kushandura mamiriro ezvinhu ndiko kwakakosha pakuita uku.
Kana iwe wakafarira chinyorwa ichi uye ikozvino iwe unoda kuziva bhaibheri rinoti kudii nezve depression, ramba uchivhura Ziva.online.